Soomaali IS katirsanaa oo dalka dib loogu soo celinayo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Soomaali IS katirsanaa oo dalka dib loogu soo celinayo
Soomaali IS katirsanaa oo dalka dib loogu soo celinayo
January 22, 2020 Duceysane296
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ogolaaday qorshe ah in la isku dayo in dib loo soo celiyo haweenka soomaali- iswiidhishka iyo carruurtooda ee ku sugaan xerada IS Ee Magaladda Al-Hawl Gudaha Dalka Syria.
Haddaba sida uu usheegay Radio Sweden oo la xiriiray Danjiraha Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Mudane Cali Saciid Faqi.
Isaga oo ay ka wareysten xaladda muwaadininta Soomaliyeed ee labadda jinsiyadood leh iyo mowqifka ay ka qabaan dhankood kan dawlad ahaaned.
Mudane Faqi Ayaa yiri Run ahaantii Waa Muwadiniin Soomaaliyed oo uu bahan gargar waana waajib na saaran ka dawlad ahaan waa in aan garab istagno muwadiniyiinteena, Inkast haweenka halkaas ku sugaan ay yihiin haween haysta jinsiyado dadalka kale waa in aynu ka war sugnaa Dalalka ay jinsiyadahooda haystan marka hore.
Balse hadeysan cidna dooneynin iyaga, Inay dib ugu soo celiyaan dalalka ay jinsiyadahooda haystaan oo ay iska diidaan in ay wax uu qabtaan,
Anaga kan xukumadd ahaan waxaan haysana go’aan uu Madaxweynaha Soomaaliya horey u go’aamiyey oo ahaa in haweenka iyo carruurta doonaya in la geeyo Soomaaliya aynu soo qaadno, Said Faqi ayaa u sheegay Idaacada Ekot ee Dalka Sweden.
Dhanka kale Doodda ayaa waxaa ka mid ah in dadkaas Soomaaliya ay ka wadato Suuriya sida uu danjire Fiqi sheegayna haweenka iyo carruurta maxkamad lama soo taagi doono maadaama buu yiri aysan Soomaaliya dembi ka gelin kana soo socdaalin.
Sikastaba ha ahaatee, soo qaaditaankan haweenka iyo carurta ayaan la hubin sida uu ugu surto gali karo iyo inta uu qadanaayo hawshan adag.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden arrinkan dusha way ka ogtahay waxaayna ka haysa macluumaad in kastoo aysan dooneyn in ay faaloo ka bixiyaan Sida uu qorshuhu yahay dhanka haweenka iyo caruurtoda haysta labada dhalasho ee aan wali lagu soo celin dalka sweden.
Dhanka kale Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ma rabto inay faahfaahin ka bixiso faahfaahinta ku saabsan qorshayaasha Xukumadda Soomaaliya ay damacsan tahay ee dhanka muwadiniyiintooda.
Wayna dhagaysteen, waxaan fursad u helnay inay na dhagaystaan. Laakiin kama helin arrintaas mas’uuliyiinta dalka Sweden, ayuu yiri aabbe isku dayaya inuu gabadhiisa dib ugu soo celiyo dalka. Sidaa ayuu u sheegay Idacadda Ekot.